कलाकार टोलीहरु देउसी भैलो कार्यक्रममा रमाउदै « Kalakhabar
कलाकार टोलीहरु देउसी भैलो कार्यक्रममा रमाउदै
प्रकाशित मिति : शुक्रबार, ३ कार्तिक २०७४ ०८:२५
३, कात्तिक, काठमाण्डौ, राजकुमार राई, मुनलाईट फिल्मस प्रा.ली., त्रियुगा फिल्मस प्रा.ली.तथा कला संगम मल्टि मिडिया प्रा.ली. को संयुक्त प्रस्तुतिमा आयोजित देउसी भैलो कार्यक्रममा देश भरका राष्ट्रिय कलाकारहरुको उपस्थिति रहेका छन् । कुनै पैसा कमाउने मात्र नभएर, नेपाली कला सस्कृतिको संरक्षण तथा आफ्नो मौलीक पहिचान कायम गरी आमसमुदायलाई मनोरञ्जन प्रधान गर्नका लागी यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।
टेलीभिजनको पर्दामा मात्र देखिएका तर कयौ आम जनमानसले प्रत्यक्ष रुपमा नदेखिएका राष्ट्रिय कलाकारहेरुको वेजोड प्रस्तुति टोल टोलमा पुरयाउनु यस कार्यक्रमको मुल उद्देश्य रहेको छ । कार्यक्रममा हाँस्यव्याङग्य, प्रहशन, गायन,नृत्य तथा विभिन्न प्रस्तुतिहरु समावेश गरिएको छ ।
कोरियाग्राफर जोहन राईको प्रशिक्षणमा कम्पोज गरिएका विभिन्न देउसी भैलो नृत्यहरु प्रस्तुत गरिने भएको छ । लक्ष्मीपूजाको दिनबाट सुरु गरिएको देउसी भैलो कार्यक्रम भाईटीकाको भोली पल्पल्ट समापन गरिने कार्यक्रम निर्देशक तथा नायक युविन ढुङथागानाले बताउभएको छ । कलाकारहरुको आकर्षक प्रस्तुति देखेर आम जनमानस उर्लिएको छ ।
नायक युविन ढुङगाना र नायीका अनुपराजूलीको संयक्त फिल्मी प्रस्तुतिले कार्यक्रमलाई झन रोचक बानाएका थिए । साथै हाँस्यव्यग्ङय कलाकार अशिक राई, मेरी बासैका दाह्र्री बा (सुरवीर पाण्डे) ले विभिन्न कमेडी र हाँस्यव्याङग्य प्रहशनको माध्यमबाट आमजनमानसलाई पेट मिचिमिचि हसाएका थिए ।
रोक गायीका सरस्वती लामा, चर्चित लोक गायीका विनिता राई, शर्मिला के.सी., किरण तामाङ, डि.बी. तामाङ, आदीले आमजनमानसलाई जुरुक जुरुक उठाएर नचाएका थिए । मोडल सविता राई, कोरिया ग्राफर जोहन राई, सृष्टि ठोकर, नविन बुढा थोकी, सुस्मिता वाईबा, सुरेश भट्ट आदिले समुहिक नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रमको आकर्षक देखेर आम दर्शक सबैले सोचेको भन्दा राम्रो आर्थिक सहयोग गरेकोकार्यक्रम संयोजक आशिक राईले बताउनु भएको छ । सत्यकला राई , नवल खडका, हलके हवल्दारका लछुमन चौलागाई, मेरी बासैका रोहित कार्की, सिता अधिकारी , तथा राजु मास्टर, नृत्यकार पुनम घिसिङ आदिको प्रस्तुति बाँकी नै रहेको कलाकार व्यावस्थापक पासाङ लोपचनले कलाखबरलाई बताए । कार्यक्रमलाई सञ्चार कर्मी भवन श्रेष्ठ र सुनिता राईले सञ्चालन गर्दै आएको छ ।